व्यावसायिक पातलो कैंची | पातलो कपाल कपालका लागि - जापान कैंची
पेशेवर कपाल पातलो कैंची
घर / पेशेवर कपाल पातलो कैंची
ब्राउज गर्नुहोस् उत्तम कपाल पातलो कैंची संसारभरि सैलुन र नाई पसलहरूमा प्रयोग गरिन्छ!
कपाल पातलो बनाउने ब्रान्डहरू: Jaguar, Yasaka, Kamisori भेडाहरू, Ichiro कैंची, Joewell, र अधिक!
20, 30, 40 र थप दाँत भिन्नताहरूबाट बनाइएको उत्कृष्ट एर्गोनोमिक पातलो कैंची किन्नुहोस् प्रिमियम कैंची स्टील!
आफ्नो कपाल पातलो कैंची खरिद गरेर बचत गर्नुहोस् हेयरड्रेसिङ कैंची सेट वा किट! जान्नुहोस् पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने घरमा।
Jaguar जे २ कपाल पातलो कैंची
Joewell E40 कपाल पातलो पातलो कैंची
Juntetsu पातलो कैंची अफसेट
Jaguar गुलाबी पूर्व शैली एर्गो पातलो कैंची
Yasaka वाईएस In.० ईन्च कपाल पातलो कैंची
Jaguar सेतो रेखा साटन प्लस पातलो कैंची
Ichiro पातलो कैंची अफसेट गर्नुहोस्
Jaguar टाँस्नुहोस् प्लस ES40 क्यान्डी पातलो कैंची
Jaguar साटन डबल पक्षीय कपाल पातलो कैंची
Mina सकुरा पातलो कैंची
जुनटेत्सु गुलाब पातलो पातलो कैंची
Yasaka YS-306इंच कपाल पातलो कैंची
Jaguar प्रि स्टाईल एर्गो पी कपाल पातलो कैंची
जंटेत्सु चम्पर १० दाँत पातलो कैंची
Mina ऐश कालो पातलो कैंची
Ichiro पातलो कैंची आराम गर्नुहोस्
Ichiro म्याट कालो पातलो कैंची
Jaguar Pastell Plus ES40 Viola Thinning कैंची
Jaguar रजत रेखा फेम कपाल पातलो कैंची
हाम्रो पातलो कैंची / कतराहरू चयनित प्रीमियम ग्रेड जापानीज वा जर्मन स्टीलबाट बनेका छन् र व्यवसायमा पेशेवरहरूले डिजाइन गरेका छन्। जापान कैंची कपाल पातलो कैंची प्रसिद्ध ब्रान्डबाट आयात गरिन्छ जान्तेत्सु कैंची,Jaguar कैंची, रYasaka कैंची.
हेयरड्रेसिंग / बार्बर पातलो कैंचीले बनावट / स्तरित सौंदर्यको लागि अनुमति दिन्छ, एक उद्योग आधुनिक हेयरस्टाइलको दायराको लागि आवश्यक छ। हाम्रो सबै पातलो कैंची दुबै सटीक र टिकाऊ हो, परिणामस्वरूप कुनै लेयरिंग प्रभावको लागि लगातार सफा काट्नुपर्दछ।
पातलो कैंचीको बारेमा थप पढ्नुहोस्
प्रत्येक कतरनीले क्रेन ह्यान्डलदेखि अफसेट सम्मका एर्गोनोमिक ह्यान्डल डिजाइनहरू प्रदान गर्दछ, जुन तपाईंलाई दिनभर लामो आराम र नियन्त्रणको अधिकतम रकम प्रदान गर्दछ।
यसको बारेमा थप पढ्नुहोस्: पूर्ण पातलो कैंची गाईड
पातलो कैंची भनेको के हो?
कपाल पातलो र बनावट कपालहरू दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने कपाल काट्ने उपकरण हो जुन सलुन, कपाल, र नाई पसलहरूमा पाइन्छ।
पातलो कैंचीको एक ब्लेडमा तीखो दाँत हुन्छ र अर्को छेउमा सामान्य ब्लेड ब्लेड हुन्छ। यी पातलो स्किसर ब्लेडहरूले मात्र प्रत्येक काट्ने गतिमा दाँतहरूको बीचमा कपाल काट्छन्।
यी कैंची मुख्यतया हाम्रो बाक्लो र घुमाउरो कपाल पातलो गर्न प्रयोग गरिन्छ।
हामी दायाँ र बायाँ हात पातलो कैंची आपूर्ति, अद्वितीय र कुशल शैली को एक दायरा मा उपलब्ध; स्टेनलेस स्टील, इन्द्रेणी क्रोम, विभिन्न प्रिन्ट, गुलाब सुन, र म्याट कालो डिजाइन।
हाम्रा सबै पातलो कैंचीहरू उद्योग पेशेवरहरूले हस्त-रचना गरेका छन् र थोरै मर्मतको आवश्यकता छ कि यो हुनुपर्दछ कि यी उपकरणहरू एक विश्वसनीय कतरना वर्ष र बर्ष बाहिर छन् भनेर सुनिश्चित गर्न।
जापान कैंचीमा हामी तपाईलाई अत्यन्त गुणस्तरीय पातलो कैंची प्रदान गर्दछौं जुन बजारमा तपाईको मनको चाहनालाई कुनै टेक्सराइजिंग प्रभावको लागि आदर्श हो। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं अर्को पातलो शियर चाहानुहुन्छ जुन यस पृष्ठमा छैन र टोली सदस्य सहयोगमा खुशी हुनेछ।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने!
पातलो पातलो कैंची कसरी छनौट गर्ने
कपाल पातलो कात्रीहरू खरिद दुई प्रकारका हुन्छन्: अनलाइन र भौतिक खुद्रा स्टोरहरू।
कैंचीका लागि उत्तम मूल्यहरू अनलाइन हुन्छन्, किनकि तिनीहरू सिधा गोदामबाट तपाईंको ढोकामा पठाउँछन्।
जब कपाल पातलो कात्रीहरू खरीद गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तीन मूल्य प्रकारहरू फरक मूल्यहरूमा उपलब्ध हुन्छन्, र यसमा समावेश छन्:
घर कपाल पातलो कैंची ($ 50-150)
प्रशिक्षु र विद्यार्थी कपाल पातलो कैंची ($ 100-250)
पेशेवर कपाल पातलो कैंची ($ १-150०--500००)
त्यहाँ केश पातलो कैंची को केहि फरक प्रकार छन् तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ, र ती समावेश:
40 दाँत अनुमानित 50% कट अफ छ
30 दाँत अनुमानित 35% कट अफ छ
20 दाँत अनुमानित 25% कट अफ छ
16 दाँत अनुमानित 15% कट अफ छ
कपाल कती पातलो वा पातलो छ भन्नेमा निर्भर गर्दै, तपाईं पातलो कैंचीको भिन्नै जोडी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यी पातलो कात्रीहरू सामान्यतया "" इन्च "मा आउँदछन्, तर तिनीहरू" "इन्च र and..6" इन्च जत्तिकै सानो हुन सक्छन्।
हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड कपाल पातलो कैंचीबाट खरीद गर्न:
Ichiro कैंची (१००-२100०)
Kamisori भेडाहरू (300 १600० -XNUMX -१,, ० XNUMX १)
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक कैंची ब्रान्ड
पातलो कैंचीको मूल्य के हो?
कपाल पातलो र बनावट क्यान्सर एक विस्तृत विविधता मा आउँछ, तर तपाईंले कति तिर्ने आशा गर्नुपर्छ?
तपाईं ning 50 भन्दा कममा पातलो कैंचीको एक जोडी खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, तर ती राम्रोसँग प्रदर्शन गर्दैनन्।
कपाल कपाल पातलो र बनावट को शिल्प कौशल को नाजुक छ।
सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिने दाँतहरू V-shaped, Serrated, वा प्रिज्म-आकार दाँत हुन्।
काँटी काट्ने तुलनामा, पातलो कैंचीलाई tugging वा खींच बिना प्रदर्शन गर्नको लागि राम्रो स्टीलको आवश्यक पर्दछ।
पातलो कैंचीका लागि न्यूनतम आवश्यक सामग्रीहरू कडा कडा स्टेनलेस स्टीलको छ, र यी जोडीहरू प्राय: cost १ cost० लागत।
राम्रो सामग्री छिटो दाँत को छ र तपाईं एक लगातार पातलो दर छ।
जापानी कैंचीले प्रीमियम सामग्री प्रदान गर्दछ जुन वास्तवमा पातलो र बनावट अनुभव बृद्धि गर्दछ।
हरेक पातलो कैंचीको मूल्य ब्रेकडाउन
यहाँ केश कपाल पातलो पार्ने र बनावट बनाउने कपालको लागि तपाइँ कति तिर्नुहुनेछ भनेर हाम्रो द्रुत सारांश छ।
पातलो प्रकार सामाग्री मूल्य
१२ दाँत 440C $ 199-299
१२ दाँत 440C $ 249-399
बनावट VG10 $ 399-599
पातलो VG10 $ 399-599
पातलो स्टेनलेस स्टील $ 149-249
स्टिलको उच्च गुणको साथ तपाईं उच्च मूल्यको साथ पाउनुहुनेछ, सिसाई दाँतको किनारहरू तीव्र पोइन्टहरू र उच्च अखण्डता हुन्छ।
यदि तपाईं सस्तो मूल्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं अझै पनि स्टेनलेस स्टीलको साथ तपाईंको पातलोबाट सभ्य कटअवे प्रदर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तर दैनिक प्रयोगका लागि आवश्यक पेशेवर थिनरहरूको लागि तपाईंले कति तिर्नु पर्छ? हामी कहिँ पनि $ २249 and र 399 XNUMX between बीचमा भन्न सक्छौं।
उच्च गुणस्तरको अर्थ तपाईले कम पटक धारिलो पार्नुभयो र तपाईले १२ देखि २ months महिना भित्र पैसा बचत गर्नु भयो।
यदि तपाइँ घरको लागि सस्तो मूल्य खोज्दै हुनुहुन्छ वा हेयरड्रेसिंग अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने, तब स्टेनलेस स्टील Jaguar or Mina Texturizing Shears को जोडी मात्र $ १149। छ।
अधिकांश पेशेवरहरूले यसको लागि भुक्तान गर्छन् Jaguar जे २ वा Mina अभ्यास गर्नका लागि जे पातलो। १००-१-100 $ को कम मूल्य पोइन्टले दैनिक अभ्यासको लागि सजिलो खरीद बनाउँदछ।
समग्रमा, राम्रो गुणस्तरको पातलो र बनावट बनाउने कैंचीको मूल्य कहिल्यै सस्तो भएको छैन! त्यसोभए शपि !्ग सुरु गर्नुहोस् र हामीलाई सन्देश पठाउनुहोस् यदि तपाईंलाई कैंचीको बारेमा कुनै प्रश्न छ!
पातलो कैंचीले कसरी काम गर्दछ?
कपाल र नाईहरूको लागि, सामान्य कपाल काट्ने कपालहरू तपाईंलाई आवश्यक छन्। तर त्यहाँ केहि समय हुन्छ जुन ग्राहकहरूको कपालको मोटा र कर्ली प्याच हुन्छ।
बाक्लो कपालका लागि पातलो कैंची कपालको भाग पातलो गर्न प्रयोग गरिन्छ जसले कपाललाई हल्का रंग प्रदान गर्दछ।
पातलो कैंचीको साथ प्रत्येक काट्ने गतिले सामान्यतया २०% बाट %०% प्रतिशत ओले कपाल र १%% देखि २%% प्रतिशत शुष्क कपाल काट्छ।
पातलो कैंची कपाल पातलो हुनुको मतलब सामान्यतया उच्च पातलो र कटौती हुने हुन्छ, त्यसैले teeth० दाँत पातलो पार्ने कैंचीले %०% काट्न सक्छ र १० दाँत पातलो पार्ने कैंचीले १ 40% काट्न सक्छ।
पातलो कैंचीमा दाँतले कपाल काट्छन्, र ती दाँतहरू तीखा हुन्छन्, अधिक कपाल ती पातलो हुनेछन्।
व्यवसायिक पातलो र टेक्शराइजिंग क्यान्सरको मूल्य anywhere १ to० देखि $०० सम्मको बीचमा पर्छ।
दाँत कडा स्टील कडा स्टिल को आवश्यकता छ को लागी, कैंची काटि तुलनामा, यो प्रिमियम इस्पात बाट बनेको एक उच्च गुणवत्ता पातलो कैंची हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
के पातलो सिंचीले कपाल छोटो पार्छ?
कसरी हामी स्पस्ट पार्छौं कपालमा पातलो पातलो प्रयोग गरेपछि के हुन्छ। पातलो कात्रो (कपालको उपकरण) ले मासलाई कम गर्न सक्छ र जब प्रयोग गल्ती गरी हुन्छ eli हुन्छminaटे लम्बाई जो केहि को लागी एक डर हुन सक्छ।
मैले मेरो आफ्नै कपाल एक दर्शकको अगाडि गरेको थियो वर्षौं अगाडि र सौन्दर्यकर्मीहरूले प्रत्येक (लहरि कपाल) मोडलमा पातलो कतरन र रेजर प्रयोग गरे। यसले मेरो कपाल मेरो फ्रिज हाइलाइट नष्ट गर्‍यो।
कुन छाला पातलो कपालको साथ तपाईले छान्नु हुन्छ भन्दा राम्रो हो भन्ने बुझ्दै। यो वास्तविक प्रत्येक पातलोले अनौंठो पातलो प्रदर्शन गर्दछ वा दाँतको संख्याका कारण कपाल छोटो पार्दछ।
कलिलो कात्रो इली कसरी हेर्नको लागि एउटा शालीन विधिminaते कपालले प्रत्येक पाँचौं स्ट्रन्डलाई ट्रिम गर्ने बारे विचार गर्नुपर्दछ (यसले थप भाग विभाजनमा भर पर्ने ट्रिम गर्न सक्छ)। त्यसोभए, जब सही ढ mass्गले उपयोग गरियो भने लम्बाइलाई हेर्दा हेअरस्लाई आधुनिकीकरण गर्न कम हुनेछ।
यस बिन्दुमा जब गल्तिले प्रयोग गरियो, कपाल धेरै पातलो हुन्छ र लम्बाइ खतरामा पर्दा सामान्य हेयरडोलाई मैत्रीको अभावमा गाडी हाँक्दछ। अब के हुन्छ सोच्नुहोस्? वास्तवमा, मैले भविष्यको शैलीहरू समायोजन गर्न र तयारी गर्नका लागि अधिक कपाल छाँट्नु पर्छ। सबैलाई तपाईंको कपाल ट्रिम नगर्न प्रयास गर्नुहोस्, सामानहरू गलत रूपमा सुरू हुन्छ।
के नाइहरूले पातलो कैंची प्रयोग गर्छन्?
मध्यमदेखि लामो लम्बाइका साथ नाताले बाक्लो कपालका लागि पातलो कैंची प्रयोग गर्दछ। त्यसोभए तपाईंसँग काँढा-लम्बाइ मोटो र घुमाउरो कपाल छ भने, तपाईंको हजामले पातलो कात्रोको भरपर्दो जोडी बाहिर ल्याउन सक्छ।
पातलो कपाल दाँतहरूको संख्याको आधारमा फरक हुन्छ। पातल पातलो र थोरै दाँत बढी दाँतको मतलब क्यान्सरले कपालको ठूलो भाग लिनेछ।
के तपाइँ तपाइँको बार्बर पातलो कैंचीको एक जोडी आशा गर्नुहुन्छ?
सामान्यतया, हो, नाइहरूले आफ्नो ग्राहकको लामो र बाक्लो कपाल पातलो पार्न पातलो कैंची प्रयोग गर्नुपर्दछ।
नाईको रूपमा, तपाईं आफ्नो कुर्सीमा विराजमान प्रत्येक ग्राहकलाई ह्यान्डल गर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ।
पातलो कपाल एक सरल र सजिलो प्रक्रिया हो जहाँ तपाईं बाक्लो कपालको क्षेत्रहरू पत्ता लगाउनुहुन्छ, पातलो कपालहरू लिनुहोस् र पातलो गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं उल्लेखनीय भिन्नता देख्न सक्नुहुन्न।
नाजुकहरू आफ्नो ग्राहकको कपाल पातलो गर्दछन् जब यो धेरै गाढा र घुमाउरो हुन्छ, र गर्मीमा पनि उनीहरूलाई कूलर राख्न। कसैलाई पनि तातो गर्मीको दिनमा कपालको टाउको मन पर्दैन!
त्यहाँ धेरै साना कुना नाईका पसलहरू छन् जसले केवल काटेको कपालको जोडी र उनीहरूको ग्राहकहरूमा घाँटीको रेजर प्रयोग गर्दछ।
समय भन्दा पहिले सँधै सोध्नुहोस् र म निश्चित छु कि नाईले तपाईंलाई बताउनेछ कि यदि उनीहरू तपाईंको कपाल काट्न सक्षम छन् भने।
नाताले गाढा र घुमाउरो कपालको साथ ग्राहकहरूमा पातलो कपालको प्रयोग गर्दछ। मध्यमदेखि लामो कपाल पातलो हुनुले गर्मीको समयमा टाउकोलाई शान्त राख्दछ र स्टाइलमा पनि मद्दत गर्दछ।
नाइगहरूले सबै प्रकारका हेयरस्टाइलहरू काट्छन्, त्यसैले पातलो कात्रो तिनीहरूको कात्तीको काट्ने काम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।